दोस्रो त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै युनिक लघुवित्तको नाफा घट्यो | Artha News Nepal
Home	बैंकिङलघुवित्त	दोस्रो त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै युनिक लघुवित्तको नाफा घट्यो
दोस्रो त्रैमासमा निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै युनिक लघुवित्तको नाफा घट्यो
काठमाडौं – युनिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालू आवको दोस्रो त्रैमासीक वित्तीय विवरण आइतवार सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा १६ प्रतिशतले कमि आएको हो ।
गत आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ४ करोड ७ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा घटेर रू. ३ करोड ४१ लाखमा सिमित भएको हो । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जामा वृद्धि भएकाले नाफा घटेको हो ।
गत आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको सोही अवधमिा बढेर १० दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ९ करोड ६८ लाख रहेको छ भने जगेडा कोषमा रू. १५ करोड २४ लाख सञ्चित गरेको छ ।
चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. २ करोड ४७ लाख खराब कर्जा उठाउन सफल भएको हो । कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ५८ लाख ६३ हजार खराब कर्जा उठाएको थियो । त्यसैगरी चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी गत आवको तुलनामा १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
निष्क्रिय कर्जायुनिक लघुवित्त